Halkuu MW Xasan ku tagi doonaa safarkiisa 1-aad? | KEYDMEDIA ENGLISH
Halkuu MW Xasan ku tagi doonaa safarkiisa 1-aad?
Lafta-gareen, wuxuu aad ugu dhowaa Kooxdii Farmaajo, waxaana la rumeysan yahay inuu saameyn xooggan ku leeyahay Golayaasha Baarlamaanka, maadaama uu hoggaan ka ahaa maamulka ay ka soo baxeen Xildhibaannada ugu badan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha JFS Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu wadaa inuu safarkiisa ugu horreeya ku tago magaalada Baydhabo ee caasimada KMG ee maamulka Koonfur Galbeed, halkaasoo ay ka aloosan tahay xiisad siyaasadeed.
Dhawaan shaqsiyaad aad ugu dhow Madaxweynaha 10-aad ayaa Muqdisho, ka billabay, kulamo looga soo hor jeedo Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Laftagareen, taas ayaana durba dhalisay mad-madow xooggan oo soo kala dhex galay labada dhinac.
U jeedka ugu weyn ee Xasan Sheekh u tagayo Baydhabo, ayaa ah inuu la kulmo Laftagareen, oo muddo xiledkiisa uu ka dhiman yahay kaliya Lix bilood, wuxuuna kala hadli doonaa sidii doorashada maamulkaas u dhici lahayd waqtigeeda, ugu danbeyn December sanadkaan.
Inta badan shaqsiyaadkii siyaasadda ku matalayay Bay iyo Bakool, oo u badnaa kuwo ku daaban Xasan Sheekh, ayuu Lafta-gareen ka hor istaagay in ay kuraas Baarlamaan u tartamaan, kuwaas oo xilligaan culeys xooggan ku saaraya banneynta kursiga.
Madaxtooyada ayaa la fahasan yahay in ay fara-galin ku sameyn doonto maamulka Baydhabo, maadaama uu ahaa mid Farmaajo, Kheyre iyo Fahad, si jajuub ah ku dhiseen 2018, markaasoo ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ah musharrixiintii tartanka ku jiray.